Megalopolis X Shenzhen Super Header
Fraịdee 26 Febrụwarị 2021
Megalopolis X Shenzhen Super Header Megalopolis X ga-abụ ogige ọhụrụ n'ime obi mpaghara mmiri buru ibu, na nso ókè-ala n'etiti Hong Kong na Shenzhen. Atụmatụ nna ukwu ahụ jikọtara ije na netwọsị ndị ji ụkwụ aga, ogige na ọhaneze. A na-eme atụmatụ netwọ ụgbọ njem dị n'elu na n'okpuru ala site na ibelata njikọta n'obodo. Ngwunye akụrụngwa nke dị n'okpuru ala ga-eweta usoro maka ịjuuji mmiri na njikwa mkpofu akpaghị aka n'ụzọ enweghị nkebi. Ebumnuche bụ iguzobe usoro nhazi ihe okike nke ga-ewu obodo ga-eme n'ọdịnihu.
Urukurubụba Uwe Akpọrọ urukurubụba kpọkwasịrị aha ya maka ụdị nke urukurubụba na-efe efe. Ọ bụ obere ihe eji eme ụlọ nke enwere ike ịgbakọta n'ụzọ dị mma n'ihi nhazi nke ihe dị iche iche dị iche iche. Mgbe ọ dị mkpa ịkwaga, ọ ga-adaba adaba ka ọ bufee ụgbọ ka agbawasịchara. Nwụnye naanị usoro abụọ: 1.dobe osisi abụọ ahụ ọnụ iji mepụta X; i g makeme kwa osisi emere ka ọ di nma. 2. slide mpempe osisi ahụ n’ogiri ndị yiri ibe ha diamond n’ogidi ha abụọ iji jide ebe ndị ahụ
Etiti Oge Mgbe Ochie Na-Atụgharị Uche
Wenezdee 24 Febrụwarị 2021
Etiti Oge Mgbe Ochie Na-Atụgharị Uche Oge ochie bụ nzaghachi nye ndị ọrụ gọọmentị ka aka wuo Obodo ọdịbendị maka obere obodo anabataghị ihe na Guangdong Province, bụ nke malitere na narị afọ iteghete na Song Dynasty. Ulo elu anọ, ogha 7000 na-agbadoro ụkwụ gburugburu bụ nnukwu okwute oge ochie nke akpọrọ Ding Qi Stone, akara ngosipụta banyere mbido obodo ahụ. Nzube nke oru ngo a dabere na igosiputa akụkọ ihe mere eme na omenaala obodo ochie ebe ha na-ejikọ ochie na nke ọhụrụ. Ebe a na-ahụ maka ọdịbendị na-anọchi anya obodo ochie na mgbanwe na nhazi ụlọ ọgbara ọhụrụ.
Tiuzdee 23 Febrụwarị 2021
Ebe Ọrụ dị mma ga-eme ka mmadụ nwee mmetụta. Onye mmebe ahụ na-adapụ na ebe nchekwa ọdịnala ma tinye ahụmịhe ọhụụ na ntọala ọdịmma na ọdịnihu. A na-ewu experiencelọ Nzukọ Ahụmịhe gburugburu ebe obibi site na nlezianya ntinye nke nrụpụta nka, mmeghe nke oghere na ihe ịchọ mma nke ihe na agba dị na ya. Innọ na ya abụghị naanị nloghachi na okike, kamakwa njem bara uru.
Mọnde 22 Febrụwarị 2021
Iche Mkpuchi Ohere a Hood mere site na mkpali nke Black Hole na Worm Hole na-eme ka ngwaahịa a mara mma na ụdị ọgbara ọhụụ, nke ahụ na-akpata mmetụta mmetụta na ike ọnụ. Ọ na - eme oge mmetụta uche na iji ihe dị mfe mgbe ị na - esi nri. Ọ dị mfe, dị mfe ịwụnye, dị mfe ihicha ma hazie maka kichin iland.
Mbọsị Ụka 21 Febrụwarị 2021
Fraịdee 19 Febrụwarị 2021
Baan Igbe Nri Abalị Fraịdee 26 Febrụwarị
LOTUS Ụlọ Ịsa Ahụ Tọọzdee 25 Febrụwarị
Electra Faucets Wenezdee 24 Febrụwarị
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Fraịdee 26 Febrụwarị
Chepụta akụkọ mgbe ochie Tọọzdee 25 Febrụwarị
Nhazi nke ubochi Wenezdee 24 Febrụwarị
Onye rụrụ ụbọchị Tiuzdee 23 Febrụwarị
Otu mmebe nke ụbọchị Mọnde 22 Febrụwarị
Megalopolis X Shenzhen Super Header Urukurubụba Uwe Etiti Oge Mgbe Ochie Na-Atụgharị Uche Ebe Iche Mkpuchi Ebe